के उपेन्द्र देवकोटालाई क्यान्सर भएको हो ? – News Portal of Global Nepali
चिरन शर्मा ,लन्डन- लन्डनको किङ्ग्स कलेज हस्पिटल, ब्रिक्टनमा उपचार्थ भर्ना भएका पूर्वमन्त्री तथा वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। नेपालमा नियमित चेकअपका बेला जन्डिस देखिएपछि अकस्मात अस्पताल भर्ना भएका डा. देवकोटाले आफ्नो स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको बताए। देवकोटाले मंगलवार अपस्पतालको शैयाबाट नागरिकन्युजसंग संक्षिप्त कुरा गर्दै स्वास्थ्यमा पहिलाभन्दा निकै सुधार भएको बताए। किङ्ग्स कलेज अस्पतालको अन्तर्राष्ट्रिय तथा प्राइभेट शैयामा रहेका देवकोटाले आफ्ना शुभचिन्तकको शुभेच्छा र सद्भावले आफ्नो स्वास्थ्यलाई धेरै सहयोग पुगेको बताए।
डा. देवकोटालाई क्यान्सर भएको भन्दै आइतबार उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पशुपतिमा द्वीप प्रज्वलनसमेत गरिएकोप्रति देवकोटा परिवारले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसअघि डा. देवकोटाको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो व्यक्त गर्दै देवकोटा परिवारलाई फोन गरेर स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिएकी थिइन्।
१४०९७	पटक पढिएको